प्लस टु पछिकाे गन्तव्य-१२
टेलिकमदेखि विद्युतीय उपकरण निर्माणसम्मको अवसर इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ
दिनेश गौतम काठमाडौं, २८ साउन
कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले ‘प्लस टु पछिको गन्तव्य’ स्तम्भ सुरु गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो स्तम्भ फलदायी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । आज हामीले इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङबारे सामग्री तयार पारेका छौं ।
के हो इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन ?
विद्युतीय उपकरणको डिजाइन, डेभलप, टेस्ट र मर्मतबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने शिक्षा हो यो । हामी घर तथा कार्यालयमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्छौं । ती उपकरणका कारण दैनिक कामकाज गर्न सहज भएको छ । मोबाइल सेट, टिभी, रेडियो, रोबर्ट, कम्प्युटरलगायतका उपकरणको निर्माणदेखि यिनलाई प्रयोगमा ल्याउन योग्य बनाउन सिकाउने शिक्षा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ हो ।
प्लस टु पछिकाे गन्तव्यः
कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसनका विषयमा पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । यसमा wired communication र wireless communication बारे अध्ययन गरिन्छ । wired communication भनेको तारबाट हुने सञ्चार बुझिन्छ ।
जस्तै, टेलिफोन तारबाट हुने सञ्चार हो । wireless communication भनेको तारबिना हुने सञ्चार हो । जस्तै, मोबाइल तारबिना हुने सञ्चार हो । यो कोर्समा कम्प्युटरका विषयमा पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटर इन्जिनियरिङका कतिपय विषय मिल्दाजुल्दा छन् ।
इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ डिप्लोमा, ब्याचलर र मास्टर्स गरी तीन तहको हुन्छ । स्नातक तह चार वर्षे कोर्स हो । यसमा आठ वटा सेमेस्टर हुन्छन् । यो कोर्स त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको छ । जसमा ४८ जनाको कोटा हुन्छ । विश्वविद्यालयले क्याम्पसको क्षमता राम्रो भएको क्याम्पसलाई थप कोटासमेत दिने गरेको छ ।
११ र १२ मा विज्ञान विषय पढेकाले
जीपीए ‘सी’ प्लस ल्याएको
ए लेभल पढेकाले
विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले
स्नातक तहको कोर्सका लागि ८ देखि १० लाख लाग्छ । तर, क्याम्पसले दिने सेवा सुविधाको आधारमा खर्च केही तलमाथि हुन्छ ।
कुल कोटाको १० प्रतिशतले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयअनुसार कोटा फरक हुन्छ । ४८ जनाको कोटा छ भने ४ जनाले छात्रवृत्ति पाउँछन् ।
विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षामा धेरै अंक ल्याउने र समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । एसईई र प्लस टु सरकारीमा पढेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
समृद्धि र दिगो विकासको आधार
डिजिटल सिग्नल एनलाइसिस
कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चर
डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम
इन्टर्नसिप, प्राक्टिकल र प्रोजेक्ट वर्क
इन्टर्नसिप भन्दा पनि प्राक्टिकललाई धेरै फोकस गरिएको हुन्छ । क्याम्पसहरूले दक्ष इन्जिनियर उत्पादन गर्न प्राक्टिकललाई प्राथमिकता दिएका हुन् । क्याम्पसमै इलेक्ट्रोनिक्स सामानको निर्माण, मर्मत र अनुसन्धान गर्न सिकाइन्छ । साथै प्रोजेक्ट वर्क अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
काम गर्ने क्षेत्र र अवसर
इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण उत्पादन कम्पनी
बायो मेडिकल इन्जिनियरका रूपमा हस्पिटलमा
इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणको व्यापार व्यवसाय
राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था
हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ, च्यासल, ललितपुर
क्याथफोर्ड इन्टरनेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, बालकुमारी, ललितपुर
थापाथली क्याम्पस, थापाथली, काठमाडौं
जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेज, भक्तपुर
पश्चिमाञ्चल क्याम्पस, कास्की, पोखरा
कोसमोस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी, सातदोबाटो ललितपुर
राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज, दाङ
पोखरा इन्जिजिनियरिङ कलेज, कास्की, पोखरा
लुम्बिनी इन्जिनियरिङ, म्यानेजमेन्ट एन्ड साइन्स, रूपन्देही
कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनियरिङ, तिनकुने, काठमाडौं
कान्तिपुर सिटी कलेज, पुतलीसडक, ललितपुर
हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेसनल कलेज, पुतलीसडक, काठमाडौं
हिमालयन इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
खोपा इन्जिनियरिङ कलेज, भक्तपुर
इस्टर्न कलेज अफ इन्जिनियरिङ, मोरङ
पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, मोरङ
त्यस्तै, काडमाडौं विश्वविद्यालयले भने काभ्रेको धुलिखेलमा इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकललाई मिक्स गरेर पढाउने गरेको छ ।
जागिरभन्दा पनि आफैं इलेक्ट्रोनिक्सको व्यापार व्यवसाय गर्ने हो भने लगानीअनुसारको आम्दानी गर्न सकिन्छ । जागिर खाने हो भने मासिक कम्तीमा ४० हजारदेखि माथि कमाउन सकिन्छ । आफ्नो क्षमता र दक्षताको आधारमा तलब बढ्दै जान्छ ।
अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका विकसित देश विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । पढ्दै कमाउन सकिने भएकाले ती देश रोजाइमा पर्ने गरेको हो । विद्यार्थीहरू आफ्नै खर्चमा विदेश जाने गरेका छन् । मास्टर्स लेभल पढ्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर विद्यार्थी विदेश जान्छन् । विदेशमा १ लाख बढी कमाउन सकिने भएकाले पनि विद्यार्थीको रोजाइमा विदेशी भूमि परेको हो ।
इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको महत्त्व
इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरूको माग बढ्दो छ
रवीन्द्र खाती, विभागीय प्रमुख, कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज
इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरूको माग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । मानिसको दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने नयाँनयाँ उपकरण निर्माण भइरहेको छ । कामलाई छिटो छरितो बनाउने खालको उपकरणको खोज अनुसन्धानको आवश्यकता पर्छ ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वले धेरै फड्को मारेको छ । नेपालमा पनि सूचना प्रविधिका नयाँ आयमको खाँचो छ त्यसैले इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ शिक्षा आवश्यक छ ।
लो भोल्टेज हाई फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्ने
अमित खनाल, विभागीय प्रमुख, सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेज
इलेक्ट्रोनिक्समा ‘लो भोल्टेज हाई फ्रिक्वेन्सी’ मा काम गरिन्छ । विद्युत् उत्पादन भएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई प्रयोग गर्न विद्युतीय सामग्री आवश्यक पर्छ । विद्युतीय उपकरणको निर्माणदेखि प्रयोगसम्मका काम इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङअन्तर्गत पर्छ ।
नेपालमा विकासको काम धेरै बाँकी छ । द्रुत गतिमा विकास हुने हो भने इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरले धेरै अवसर पाउँछन् । यसमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
र र ताररहित सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्ने पनि यही कोर्स पढेकाले हो । अझै पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा फोन सेवा पुग्ने चरणमा रहेकाले इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङको माग बढ्दो छ ।
इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङको आकर्षण
रोबर्टिक्समा राम्रो अवसर छ
विकास गुरुङ, इन्जिनियर
विश्वमा अहिले जति पनि प्रविधि आएका छन्, ती सबै इलेक्ट्रोनिक्ससँग सम्बन्धित छन् । विकासका काम पनि इलेक्ट्रोनिक्सका कारण भएको हो । अहिले रोबर्टिक्समा राम्रो अवसर छ । बुझेर पढ्ने हो भने विश्वमा धेरै माग भएको क्षेत्र हो त्यसैले राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
तर, नेपालका इन्जिनियरमा आफैं उपकरण निर्माण गर्न सक्छु भन्ने आँट देखिँदैन । यसलाई सुधार गरेर जाने हो भने इलेक्ट्रोनिक्स धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । सूचना प्रविधिमा पनि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
शिवराज लुइँटेल, इन्जिनियर
टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा राम्रो अवसर छ । टेलिकमका क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो । तार वा ताररहितबाट गुणस्तरीय नेटवर्क प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यो काम गर्ने भनेको इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ पढेकाले हो ।
इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरू नेपालमा उत्पादन हुन सकेका छैनन् । नेपालमै लगानी गरेर उत्पादन गर्ने हो भने विकासमा हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौं । अहिले नेपालमा पनि इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन गर्न अनुसन्धानको काम भइरहेकाले अवसर राम्रो छ ।
विद्यार्थीको रोजाइमा इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ
इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन र इन्फर्मेसन तीनवटा विषय एउटै कोर्समा पढ्न पाइने भएकाले यो कोर्स विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । पढेपछि तीनमध्ये एउटा क्षेत्र रोजेर काम गर्न सकिने भएकाले यो कोर्स रोजेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।
दीप खतिवडा कान्तिपुर इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ पढिरहेका छन् । उनी सानैदेखि इलेक्ट्रोनिक्स पढ्न चाहन्थे त्यसैले उनले यही कोर्स रोजे ।
‘यसको दायरा फराकिलो छ धेरै क्षेत्रमा गएर काम गर्न सकिन्छ त्यसैले यो कोर्स पढेको हुँ,’ खतिवडाले भने ।
त्यस्तै, तेजप्रकाश श्रेष्ठको पनि सानैदेखि यही कोर्स पढ्न चाहन्थे । ‘यो क्षेत्रबाट देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिने भएकाले यो कोर्स पढेको हुँ,’ उनले भने, ‘सरकारी क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने सोच छ ।’
विद्युतीय उपकरण निर्माणदेखि मर्मतसम्म गर्नुपर्छ । उपकरण निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, त्यसको मर्मत पनि समयमै गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सञ्चारको क्षेत्रमा पनि फड्को मार्दै छ । सरकारी तथा निजी कम्पनी खुलेका छन् ।
नेपाल टेलिकम, एनसेललगायतको सेवा गुणस्तर बनाउन र विस्तार गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । देश संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा बनाएर काम गरिरहेको छ ।
ती क्षेत्रमा काम गर्ने भनेको इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ पढेकाले हो । देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २८, २०७६, १०:२८:००
सुधारिएको चुह्लोकाे आविष्कारक ‘रिकास्ट’ मृत्यु शय्यामा